Cheese risotto inokurumidza, yakapusa, yakapfuma uye yakasviba dhishi | Kicheni Mapepa
Montse Morote | | Chikafu cheItaly, Mapinda Anopisa
Cheese risotto chikafu chetsika cheitaly gastronomy. Nhasi ndinokukurudzirai iyo yakapusa uye isina kuomarara risotto, iyo yakajairika risotto ine chizi iyo inogona kugadzirwa nechero chizi inotapira, senge Parmesan kana musanganiswa wechizi.
Zvinoita kunge dhishi rakaomesesa sezvo uchifanira kupa iyo mupunga, asi chokwadi ndechekuti inotorwa nekukurumidza uye ndinokuvimbisa kuti uchaifarira, kumba kubva zvatakakuedza tinoifarira, zvakare iri nyore uye ndiro yekutsanya.
Pano ini ndinokusiira iwe nhanho yeiyi iri nyore kwazvo kugadzirira.
Recipe mhando: Entree
1 litre yehuku kana yemuriwo muto
400 gr. yemupunga wenguva dzose kana iyo Arborio
125 ml. waini chena
3 tablespoons rinorema kirimu kana kirimu yekubika
3-4 tablespoons parmesan cheese kana shredded cheese musanganiswa
3 maaspuni emafuta
Tinopisa muto mupani.
Isu tinoisa pani yekutsva pamoto wepakati, zvakatemwa chekai hanyanisi ndokuiisa kune fry mupani.
Kana hanyanisi iri pachena, wedzera mupunga, tichamumutsa, sanganisa zvakanaka nehanyanisi nemafuta kwemaminetsi maviri kusvika matatu.
Tichawedzera waini zvishoma nezvishoma, ichikurudzira kwemaminitsi 3-4, kusvikira doro rapwa.
Iye zvino tichawedzera pani yemuto unopisa kwazvo kune mupunga, tichamutsa kusvikira yanyura, isu ticharamba tichiwedzera imwe sosi yemuto uye ichikurudzira uye iite kuti idhonwe nemupunga uyezve ibike. Tichava seizvi kwemaminitsi makumi maviri.
Sezvo mupunga unobika, musanganiswa unowedzera.
Kana muto wapera uye mupunga wabikwa, tinodzima moto.
Wedzera munyu, mhiripiri nechizi yakakangwa, tichamutsa ben kusvikira chizi yanyungudika uye tava nekarimu uye yakasanganiswa zvakanaka.
Isu tinobva tashanda pamahwendefa uye tichimwaya neparsley shoma uye grated chizi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Cheese risotto